Atụmatụ 7 iji wulite Ugo Na-aga nke Ọma Ngwaahịa | Martech Zone
Dika ulo oru choro iweta uzo ohuru n'ime uzo ndi a na-achotaghi, atumatu uto na-abawanyewanye ewu. Ma olee ebe ị na-amalite? Kedu ị na-amalite? Aga m ekweta, ọ nwere ike ịbụ oke.
Nke mbụ, ka anyị kwuo maka ihe kpatara atumatu uto ji adị. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ na-anwa ịbawanye ego ha nwere, ha nwere ike ime ya n'ụzọ ole na ole: gbasawanye oke ngwaahịa, melite uru usoro ọ bụla, ịbawanye uru ndị ahịa na ndụ, wdg. N'aka nke ọzọ, ụlọ ọrụ nwere ike ịdabere na nnwale ọhụụ ọhụụ ọhụrụ iji gbanye ngwakọta ọwa ha ma ree nye ndị na-ege ntị. Nke na-ewetara anyị ihe kpatara ụfọdụ ụlọ ọrụ, dị ka Readers.com, na-etinye ego na azụmaahịa uto iji nweta ọtụtụ ndị ahịa. Ọ bụ ezie na enwere ike itinye uche ọgụgụ isi n'ọtụtụ akụkụ nke azụmaahịa gị (mụbaa mmata, njigide, wdg), maka ebumnuche nke isiokwu a, m ga-ezo aka na uto nnweta ndị ahịa.
Ndi otu anyi toro na mbido afo nwere otutu nsogbu, nwee otutu mmeri ma ghara ikwe ka odida. Ma ị nweelarị azụmaahịa azụmaahịa ole na ole n'ọnọdụ, ma ọ bụ na ị maghị etu esi amalite usoro a, nke a bụ ihe ole na ole ndị otu anyị mụtara n'afọ gara aga gbasara iwulite igwe dị mma iji mepụta ọwa nnweta ndị ahịa na-akọwabeghị. .
Na-anakọta echiche uto site n'aka onye ọ bụla.
Ngalaba dị iche iche na-enye echiche pụrụ iche maka ebe ohere dị. Ndụmọdụ m: m bụ ọrụ ha. Otu onye otu Injinia na otu onye otu a ga - enye ọtụtụ echiche dị iche iche. Jiri nke a.
Ọbụghị naanị na ịme ndị otu dị iche iche na-enye gị ezigbo mmalite, ọ na-enye gị ohere ịme echiche na uto uto n'ime DNA ụlọ ọrụ gị. Ọ bụ ezie na ndị otu uto gị nwere 'uto ụzọ', ma ọ bụ atụmatụ uto ị na-eme atụmatụ iji mejuputa n'ime oge enyere, onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ kwesịrị inwe mmetụta nke ịnwe ya.
Gbaa mbọ hụ na ị nwere ikike nchịkọta na akụrụngwa data na ebe.
Ejila ife ìsì. Mgbe ịmalite ịmalite uto ọ bụla, ị ga-enwerịrị nkọwa doro anya nke etu esi aga nke ọma yana otu ị ga-esi soro ya. Inwe ezigbo ngwa iji tụọ ihe mgbaru ọsọ gị nke ọma. Usoro ị ga - eji kpebie ihe ga - eme nke ọma ka a ghee ya n’ime ọkwa a ga-eme ma kọọ ya oge niile. Mmetụta nzaghachi siri ike bụ ọbara gị. Naanị mgbe ahụ ka ị ga - enwe ike ịmụta site na nsonaazụ ule ahụ wee wuo nnukwu na atụmatụ ka mma n'ọdịnihu. Dị ka ọtụtụ iji nwee ihe ịga nke ọma, nchịkọta nyekwara ndị otu gị aka ịchịkọta ihe ọmụma na mmụta ọhụụ site na nyocha emereghị nke ọma.
Na-ebute echiche uto ụzọ nke ọma iji lekwasị anya n'inye kacha aba uru.
E nwere ọtụtụ puku ọwa ahịa nnweta dị maka gị, ịghara ịkọwa ohere ọhụụ na-akụ kwa ụbọchị. Dị ka onye na-azụ ahịa na-eto eto, ịkwesịrị ịchọpụta otu esi eme ya ị nwere ike ịnapụta ụlọ ọrụ gị uru kachasị na ya site na ohere ndị a. Na nkenke, ịmụta ịkwado na ibute echiche ụzọ dị mkpa.
Ọrịa ihe na-egbu maramara nwere ike ịbụ ọnye nkịtị maka ndị na-ere ahịa uto na-egbochi ohere ọhụụ. Adala ya. Kama, nabata usoro iji belata mkpọtụ ahụ ma webata usoro ekwughachi na nke nwere ike ịha. E nwere ọtụtụ ụzọ atumatu e si aga ebe ahụ gbasara usoro ọrụ uto, yabụ hụ na ndị otu gị na-ewepụta oge iji chọta nke kachasị arụ ọrụ maka gburugburu gị.
Ekwela n'ihe ize ndụ na ụgwọ ọrụ.
Ọ bụ ezie na anyị na-ebute ọnụ ọgụgụ kacha elu 'ụsụ' anyị buru (olu, mpịakọta, olu!), Anyị ghọtara na ọ bụghị ohere niile ka ha nhata. Otu nnukwu nzọ, na-enweta traction nwere ike mfe iri obere mmeri.
Anyị achọtala ihe ịga nke ọma n'ịgwakọta na ihe ọghọm ole na ole na-adighi ike. Kọwapụta ‘nguzozi’ ga-abụ ihe pụrụ iche nye ndị otu gị, mana egbula oge dịgasị iche n’ụdị ihe egwu ị na-eweta na usoro ọ bụla. Tactfọdụ ụzọ aghụghọ na-agbazinye onwe ha nke ọma na iri na-aga, na-agagharị, na-agba ọsọ, ebe ndị ọzọ nwere ike ịchọ karịa nke ụzọ niile.
Njehie dị n'akụkụ ịgba ọsọ ọsọ ọsọ.
Oge bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, n'agbanyeghị na ọ na-abụkarị ụkọ akụrụngwa nke otu gị. Atụla egwu ịmegharị ngwa ngwa. Dịka ọmụmaatụ, ụfọdụ nyocha uto nwere onye mbu ebugharị uru, pụtara ohere nwere ike imere ndị na-etinye aka na aghụghọ tupu oge eruo ọwa. Ọ dị mkpa ịmalite n'oge dị otú ahụ, n'ihi na nke a nwere ike ịbụ ọdịiche dị n'etiti nnukwu ROI ma ọ bụ nkwụghachi azụ.
Guzosie ike na ika gi na ozi gi.
Ntuziaka a nwere ike iyi obere ihe, mana ọ bụ ezigbo usoro isi aka. Mgbe ị na-anwale ọwa uto, jụọ onwe gị, "Ọ bụrụ na usoro a nwere ezi nloghachi, anyị ga-etinye ya n'ime atụmatụ anyị ogologo oge? ' Ọ bụrụ na azịza ya bụ mba, gaa n'ihu. Ọtụtụ usoro eji etolite nwere ike ị nweta mmeri ngwa ngwa mana ọ dị oke nkpa ịghọta na ịchụ UX ma ọ bụ nghọta ọhụụ bụ, n'onwe ya, ụgwọ zoro ezo. Fọdụ ihe dị oke mma na akwụkwọ mana ọ bụrụ na ha agafee mkpụrụ nke ị bụ dị ka ika, ha erughị oge, itinye ego, ma ọ bụ mbọ.
Gosipụta nghọta na nsonaazụ na mmụta.
N'agbanyeghi otu ule nchoputa siri ike puru ibu, gbaa mbọ hu na gi na ndi otu gi dọọ demiti ka ha wee soro gị mụta ihe. Enweghị isi na ọtụtụ mmadụ na-eme otu ihe ahụ n'ihi na ndị otu egwuregwu na-ala azụ ịmekọrịta ihe ha mụtara. Ọ na-abara onye ọ bụla uru n’ikpeazụ.
N’agbanyeghi udiri ihe iguru na nyocha ihe omumu, uzo kachasi nma imuta ihe bu ịmalite imalite echiche gi. Ekwela ka obi daa gị mba ma ọ bụ tụwa ụjọ na ị ga-akụda mmụọ. Will ga-ada. Nabata ya. Mụta ihe na ya. Ma mee ya ihe niile ozo. Ọ bụ naanị ya ka esi eto.
Tags: ibuusoro aghụghọahia ahiaagụihe na-egbu maramaraAtụmatụ